‘Izay manetry tena no hendry.’​—OHAB. 11:2.
NANETRY TENA sady nohajain’ny olona i Saoly tamin’izy vao lasa mpanjaka. (1 Sam. 9:1, 2, 21; 10:20-24) Lasa niana-kendry anefa izy, tsy ela taorian’izay. Nilaza tamin’i Saoly i Samoela mpaminany fa ho avy any Gilgala izy mba hangataka fanampiana amin’i Jehovah ka hanolotra sorona. Niomana hiady tamin’ny Israelita mantsy ny Filistinina tamin’izay. Mbola tsy tonga foana anefa i Samoela. Ny ankamaroan’ny Israelita koa nandao an’i Saoly, satria natahotra. Tsy nahandry àry i Saoly fa tonga dia nataony ilay sorona, na dia tsy nanan-jo hanao an’izany aza izy. Tezitra taminy i Jehovah tamin’izay.​—1 Sam. 13:5-9.
2 Nanarin’i Samoela i Saoly rehefa tonga tany Gilgala izy. Tsy nanaiky nahitsy anefa i Saoly fa nanamarin-tena. Ny olon-kafa indray no nomeny tsiny, ary nohamaivaniny ny fahadisoany. (1 Sam. 13:10-14) Nanao zava-dratsy maromaro izy taorian’izay, ka nesorina tsy ho mpanjaka ary tsy nankasitrahan’i Jehovah intsony tamin’ny farany. (1 Sam. 15:22, 23) Ratsy fiafara ny fiainan’i Saoly, na dia tsara fiandohana aza.​—1 Sam. 31:1-6.
9 Mety ho lasa manambony tena daholo na iza na iza, raha manaiky hobaikoin’ny fanirian-dratsiny. Maro ny olona lasa sahisahy ratsy, satria te halaza na nitsiriritra na tsy nahafehy ny hatezerany. Anisan’izany i Absaloma sy Ozia ary Nebokadnezara. Nataon’i Jehovah afa-baraka izy ireo vokatr’izany.​—2 Sam. 15:1-6; 18:9-17; 2 Tan. 26:16-21; Dan. 5:18-21.
10 Misy antony hafa koa anefa mahatonga ny olona ho sahisahy. Eritrereto ange ny tantaran’i Abimeleka sy Petera e! (Gen. 20:2-7; Mat. 26:31-35) Rehefa mandinika ny nataon’izy ireo isika, dia mety hieritreritra hoe tena sahisahy tokoa izy ireo. Ratsy saina ve anefa izy ireo? Sa tsy fantany fotsiny ny zava-drehetra? Sa tsy nieritreritra tsara izy? Tsy mahalala izay any am-pon’ny olona isika. Hendry sy be fitiavana àry isika, raha tsy mitsaratsara olona.​—Vakio ny Jakoba 4:12.
11 Manaiky an’izay asain’i Jehovah ataony eo anivon’ny fandaminana ny olona manetry tena. Andriamanitra tia filaminana izy, ka samy omeny zavatra atao isika tsirairay avy. Samy ilaina isika rehetra na dia samy hafa aza ny zavatra asainy ataontsika. Tena tsara fanahy izy, ka omeny fahaizana isika tsirairay. Hita amin’izany fa manaja sy matoky antsika izy ary manantena fa hampiasa tsara ny fahaizana nomeny isika. Azontsika ampiasaina mba hanomezana voninahitra azy sy mba hahasoa ny hafa ny fahaizantsika.​—Rom. 12:4-8; vakio ny 1 Petera 4:10.
13 Mety hiatrika fiovana koa isika, ary ny fanapahan-kevitra raisintsika matetika no mahatonga an’izany. Mpitovo angamba ianao dia nanambady, ary avy eo nanan-janaka. Mety ho nanatsotra fiainana ianao, dia nanompo manontolo andro. Azo inoana fa nandray soa tamin’ireo fanapahan-kevitra ireo ianao, nefa nitombo koa ny andraikitrao. Mety ho afaka hanao zavatra betsaka kokoa ianao, na hihena ny zavatra azonao atao, arakaraka ny fiovana mitranga eo amin’ny fiainanao. Jeren’i Jehovah foana koa anefa izay fomba tsara indrindra ampiasana ny tsirairay eo amin’ny fanompoana azy. Jereny hoe tanora ve ianao sa be taona, na salama tsara ve ianao sa farofy. Tsy mitaky be loatra mihitsy izy, ary ankasitrahany foana izay vitantsika.​—Heb. 6:10.
14 Faly foana i Jesosy, na inona na inona asa nampanaovina azy. (Ohab. 8:30, 31) Afaka ny ho faly amin’izay ampanaovina antsika koa isika. Afa-po amin’izay asaina ataony na amin’izay andraikitra omena azy eo anivon’ny fiangonana ny olona manetry tena. Tsy miady saina izy hoe mbola hahazo tombontsoa na andraikitra hafa ve, ary tsy mieritreritra be momba ny zava-bitan’ny hafa. Miezaka ny ho faly amin’izay ampanaovina azy kosa izy sady manao tsara an’ilay izy, satria mino hoe avy amin’i Jehovah ilay izy. Ekeny koa hoe ampanaovin’i Jehovah zavatra ny olon-kafa, ka manaja an’izany izy. Faly izy manome voninahitra sy manampy ny olona ampiasain’i Jehovah.​—Rom. 12:10.
15 Modely ho antsika i Gideona, satria tena nanetry tena. Rehefa nirahina hanavotra ny Israelita izy, dia niteny hoe: “Ny fianakaviako ange no tsinontsinona indrindra amin’ny fokon’i Manase e! Ary izaho no kely indrindra ao amin’ny ankohonan-draiko.” (Mpits. 6:15) Nanaiky ihany anefa izy, ka niezaka mafy hahazo tsara an’izay tian’i Jehovah hataony. Nivavaka koa izy mba hahazo ny tari-dalany. (Mpits. 6:36-40) Be herim-po i Gideona, nefa koa mailo sy nitandrina tsara. (Mpits. 6:11, 27) Tsy nohararaotiny ny andraikitra nomena azy mba hahatonga azy ho lasa olona ambony. Niverina tany amin’izay nisy azy fotsiny izy, rehefa vita izay nampanaovina azy.​—Mpits. 8:22, 23, 29.
18 Ahoana anefa raha manaiky hanao andraikitra vaovao isika? Mila mangataka ny tari-dalan’i Jehovah sy ny fanampiany isika, hoatran’ny nataon’i Gideona. Tian’i Jehovah “hanetry tena” mantsy isika ‘rehefa miara-mandeha aminy.’ (Mika 6:8) Rehefa misy andraikitra vaovao omena antsika àry, dia mila mivavaka sy mandinika tsara an’izay lazainy ao amin’ny Baiboly sy amin’ny alalan’ny fandaminany isika. Tsy mahavita tena isika fa mila an’i Jehovah sy ny tari-dalany. Tadidio fa noho i Jehovah manetry tena no mahatonga antsika hahavita zavatra, fa tsy noho ny fahaizantsika. (Sal. 18:35) Raha manetry tena àry isika, dia tsy ‘hihevi-tena mihoatra noho izay tokony hoheverina.’​—Vakio ny Romanina 12:3.